Inqubomgomo yobumfihlo - EducationBro Study Abroad Magazine
Le Ingqubomgomo yobumfihlo okuye kwaqoqwa ukukhonza kangcono labo abakhathalela nge 'Ulwazi kanjani zabo okhonjwa’ (Pii) iyasetshenziswa online. Pii, njengoba kuchazwe ngomthetho ye-US kanye ulwazi lokuphepha, ulwazi engasetshenziswa ngokwayo noma nabanye ulwazi ukukhomba, contact, noma thola umuntu ongashadile, noma ukukhomba lomuntu umongo. Sicela ufunde inqubomgomo yethu yobumfihlo ngokucophelela ukuze uthole ukuqonda esicacile sendlela esiyiqoqayo, ukusetshenziswa, ukuvikela noma ngenye ukusingatha Ulwazi lakho okhonjwa ngokuhambisana website yethu.
Ikuphi ukwaziswa komuntu siqu esikuthathayo kusukela kubantu vakashela blog yethu, iwebhusayithi noma uhlelo lokusebenza?
Kunini lapho siludinga ukuqoqa ulwazi?
Siqoqa ulwazi kusuka kuwe uma noma faka imininingwane kwi site lethu.
Nikeza us ngempendulo on imikhiqizo noma amasevisi ethu
Sazi kanjani ukusebenzisa ulwazi lwakho?
Singaphinde futhi sisebenzise imininingwane esiyiqoqayo kusuka kuwe uma ubhalisa, ukuthenga, ubhalisele newsletter yethu, uphendule ucwaningo noma ukumaketha zokuxhumana, -Google website, noma usebenzise ezinye izici ezithile site ngezindlela ezilandelayo:
Sazi kanjani ukuvikela imininingwane yakho?
IWebsite yethu ihlolelwa njalo for izimbobo ukulondeka kanye nezintuba aziwayo ukuze ukuvakasha kwakho kusayithi yethu njengensindiso ephephile ngangokunokwenzeka.
Sisebenzisa ejwayelekile Iskena I-Malware.
Asisebenzisi isitifiketi SSL
• We kuphela sihlinzeke izihloko kanye nokwaziswa. We never cela ulwazi lomuntu siqu noma oluyimfihlo like amagama, amakheli e-imeyili, noma izinombolo zekhadi lokuthenga.
Ingabe sisebenzisa 'Amakhekhe'?
Yebo. Amakhukhi files amancane ukuthi isayithi noma isevisi yayo umhlinzeki ukudluliselwa drive yekhompyutha yakho hard ngokusebenzisa kwakho isiphequluli seWebhu (uma uvumela) eyenza isayithi noma izinhlelo isevisi yomhlinzeki ukuba uqaphele isiphequluli sakho awuthumbe futhi ukukhumbula ulwazi oluthile. Ngokwesibonelo, sisebenzisa amakhukhi ukusiza sikhumbule futhi ukucubungula izinto inqola yakho. Asetshenziswa ukuze usisize siqonde izintandokazi zakho zisekelwe odlule noma zamanje site umsebenzi, okuyinto eyenza sikwazi ukukunikeza ngesevisi improved. Siphinde futhi sisebenzise ama-cookie ukuze basisize ukwenza idatha sesibalo mayelana site traffic futhi site nokuxhumana ukuze sikwazi ukunikela nakho site engcono kanye namathuluzi esikhathini esizayo.
• Qonda bese ugcine izintandokazi yomsebenzisi sokuhambela esizayo.
• Gcina umbhalo walokho izikhangiso.
• Ahlanganise idatha sesibalo mayelana site traffic futhi site ekuxhumaneni ukuze anikele nakho site engcono kanye namathuluzi esikhathini esizayo. Singase futhi ukusebenzi amasevisi third-party Sokuxhunyanwa nabo eBhizinisini ukuthi umkhondo lolu lwazi egameni lethu.
Ungakhetha zinama-computer yakho ngikuxwayise isikhathi ngasinye ikhukhi ithunyelwa, noma ungakhetha ukuba cisha wonke amakhukhi. Wenza lokhu ngokusebenzisa izilungiselelo isiphequluli sakho. Njengoba isiphequluli uhlukile kancane, ukubheka Usizo Imenyu isiphequluli sakho ukuze ufunde indlela efanele ukuthi iguqule amakhukhi wakho.
Uma uvula amakhukhi off, ezinye izici lizokhutshazwa. Ngeke kuthinte isipiliyoni yomsebenzisi ezenza site lakho isipiliyoni othe xaxa futhi kungenzeka zingasebenzi kahle.
Nokho, wena usazokwazi ukubeka oda .
Asazi ukudayisa, ezohwebo, noma ngenye ukudlulisa amaphathi ngaphandle ulwazi lwakho lomuntu siqu oluhlonzekayo ngaphandle sinikeza abasebenzisi nge kusenesikhathi. Lokhu akuhlanganisi website ibamba abalingani kanye nezinye izinhlangano ubani usisize ekuqhutshweni website yethu, beqhuba ibhizinisi lethu, noma ukukhonza abasebenzisi bethu, hushazela njengoba labo livume ukugcina lolu lwazi oluyimfihlo. Singase futhi ukudedela ulwazi lapho akhululwe kuyafaneleka ukuba athobele umthetho, ukuphoqelela site yethu, noma ukuvikela eyethu noma abanye’ amalungelo, impahla noma ukuphepha.
Nokho, Imininingwane isivakashi non-okhonjwa kungase kuhlinzekwe namanye amaqembu for ukumaketha, ukukhangisa, noma kulokunye.
Ngezikhathi ezithile, ngokubona kwethu, kwangathi thina zihlanganisa noma anikele imikhiqizo third-party noma amasevisi kwi website yethu. Lezi zingosi zama-third party anezinqubomgomo zobumfihlo ahlukene futhi ezimele. Ngakho Asinayo umthwalo noma yimaphi okuqukethwe kanye nemisebenzi kwalezi amasayithi ahlobene nathi ngenxa. Noma kunjalo, sifuna ukuvikela ubuqotho site yethu futhi ukwamukela noma iyiphi impendulo mayelana kulezi zingosi.
Izidingo wokukhangisa we-Google engafingqwa Ngezimiso Ukukhangisa ye-Google. Basuke wafaka endaweni ahlinzeke omuhle kubasebenzisi. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl = en
Sisebenzisa Ukukhangisa AdSense Google kwi website yethu.
-Google, njengoba umthengisi third-party, isebenzisa amakhukhi ukukhonza izikhangiso kusayithi lethu. Ukusetshenziswa kwe-Google ikhukhi DART iyenza ukukhonza izikhangiso kubasebenzisi bethu sisuselwe ekuvakasheni kwangaphambilini kusayithi lethu kanye nezinye izingosi on the Internet. Abasebenzisi bangase ukuphuma ukusetshenziswa ikhukhi DART ngokuvakashela Google Ad futhi Ingqubomgomo yobumfihlo sokuqukethwe Network.
Siye ukusebenza elandelayo:
• Nabakuthandayo Ukubika
We, kanye nabathengisi third-party ezifana Google zisebenzisa ama-cookies lokuqala party (ezifana amakhukhi i-Google Analytics) namakhukhi third-party (ezifana ikhukhi le-DoubleClick) noma ezinye okokuhlonza third-party ndawonye ukuze bahlanganise idatha mayelana nokusebenzisana yomsebenzisi nge ad okuvelayo kanye neminye imisebenzi service isikhangiso njengoba iphathelene website yethu.
Abasebenzisi Ungasetha izintandokazi kanjani i-Google likhangisa kuwe usebenzisa ikhasi lezilungiselelo ze-Google Ad. Kungenjalo, ungaphuma ngokuvakashela Network Advertising Initiative ukukhetha ukuphuma ezikhangisweni page noma ngokusebenzisa i-Google Analytics ukukhetha ukuphuma ezikhangisweni Browser engeza.
CalOPPA ngumthetho wokuqala wombuso isizwe ukuze zidinga amawebhusayithi commercial namasevisi inthanethi ukuze uthumele inqubomgomo yobumfihlo. abanakusithola elula Umthetho sika kahle ngalé California angadinga noma yimuphi umuntu noma inkampani e-United States (futhi conceivably izwe) esebenzela amawebhusayithi lokuqoqa imininingwane ehlonza umuntu California abathengi ukuze uthumele inqubomgomo sigqamile yobumfihlo kwi website yayo kokusho ncamashi ulwazi iqoqwe kanye nalabo bantu noma izinkampani kuso okwabelwane. – Bona okuningi at: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Ngokusho CalOPPA, thina uvume okulandelayo:
Abasebenzisi bangavakashela site yethu ngokungaziwa.
Once le nqubomgomo yobumfihlo owadalwa, sizofaka isixhumanisi kulo ekhasini lethu ekhaya noma njengoba ubuncane, ekhasini lokuqala abalulekile ngemva kokungena website yethu.
isixhumanisi Zethu Inqubomgomo yemfihlo kuhlanganisa elithi 'Inqubomgomo’ futhi kungenziwa kalula zingatholakala ekhasini esishiwo ngenhla.
Uzokwaziswa kwanoma iyiphi izinguquko zomgomo wobumfihlo:
• On Inqubomgomo yemfihlo Page
Can ukushintsha imininingwane yakho siqu:
• Ngokuthumela i-imeyili us
• By ngemvume ku-akhawunti yakho
ingabe site yethu ukusingatha Ungalandeleli amasignali kanjani?
Sidumisa Ungalandeli amasignali futhi Ungalandeleli, plant amakhukhi, noma ukusetshenziswa ukukhangisa lapho Ungalandeleli (DNT) isiphequluli mshini endaweni.
Ingabe site zethu ezisivumela ukuba sikwenze third-party yokulandelela yokuziphatha?
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi sivumele third-party yokulandelela yokuziphatha
CUP (Izingane Online Privacy Protection Act)
Uma kuziwa ukuqoqwa kokwaziswa komuntu siqu kusuka izingane ezineminyaka engaphansi kweyi- 13 ubudala, Online Privacy Protection Act weZingane (CUP) ubeka abazali control. The Federal Trade Commission, I-united states’ Ukuvikelwa kwabathengi agency, isebenzisa owayo Rule COPPA, okuyinto sicacisa ukuthi yini opharetha amawebhusayithi kanye namasevisi online okumelwe akwenze ukuze sivikele ubumfihlo yezingane okuphepha aku-intanethi.
Asazi ngokuqondile emakethe izingane ezineminyaka engaphansi kweyi- 13 ubudala.
Imikhuba Ulwazi Fair
I Fair Imikhuba Information Principles yakha umgogodla umthetho ubumfihlo e-United States kanye imiqondo zihlanganisa iye yafeza indima ebalulekile ekuthuthukiseni imithetho yokuvikelwa kokwaziswa embulungeni yonke. Ukuqonda Fair Information Practice Izimiso futhi lufanele lwenteke kulamazinga lalandzelako kanjani kusemqoka ukuba athobele imithetho yobumfihlo ehlukahlukene ukuthi zivikela imininingwane yomuntu.
Ukuze kuhambisane Fair Izindlela sizobe bathathe isinyathelo esilandelayo isabela, kufanele kwenzeke lokwephulwa idatha:
Sizokwazisa abasebenzisi nge e-site isaziso
• Kungakapheli 7 izinsuku zebhizinisi
Siphinde uyavumelana ne-Individual Ukulungisa Principle odinga ukuthi abantu banelungelo ngokomthetho aphishekele amalungelo okuphoqelela ngokumelene idatha abaqoqi kanye izilimi abahluleka abanamathela emthethweni. Lesi simiso sidinga nje kuphela ukuthi abantu banamalungelo okuphoqelela ngokumelene abasebenzisi idatha, kodwa futhi lokho abantu babe Sokuzivikela ezinkantolo noma eminyangweni kahulumeni ukuze aphenye kanye / noma ukushushisa non-ukuhambisana by data izilimi.
UNGAKWAZI ugaxekile Act
I CAN-spam Act umthetho abeke imithetho imeyili commercial, usungula Izidingo ze-imiyalezo commercial, unikeza abamukeli unelungelo ama-imeyili uvimbekile Kuthunyelwa kubo, futhi sicacisa izinhlawulo ezinzima ukwephulwa.
Siqoqa ikheli lakho le-imeyili ukuze:
• Thumela ulwazi, aphendule imibuzo, kanye / noma nezinye izicelo noma imibuzo
• Ama-oda Process futhi ukuthumela ilwazi kanye updates eziphathelene oda.
• Thumela ulwazi olwengeziwe ahlobene nomkhiqizo kanye / noma isevisi yakho
• Market ohlwini lwamakheli noma uqhubeke ukuthumela ama-imeyili kumakhasimende ethu emva kuthengiselana original eyenzekile.
Ukuze sibe ngokuhambisana CANSPAM, thina uvume okulandelayo:
• Not ukusebenzisa izikhonzi noma esidukisayo noma amakheli e-imeyili.
• Tfola umyalezo njengoba isikhangisi abanye ngendlela ebonisa ukucabangela.
• Faka ikheli lendawo lebhizinisi noma isayithi indlunkulu yethu.
• Gada third-party imeyili marketing amasevisi ukuhambisana, uma kungenzeka omunye isetshenziswa.
• Dumisa lokuphuma-out / izicelo sikukhiphe ohlwini ngokushesha.
• Vumela abasebenzisi ukuba ohlelweni usebenzisa isixhumanisi ezansi imeyili ngamunye.
Uma nganoma yisiphi isikhathi ongathanda ukuzikhipha ohlwini kusukela ekutholeni ama-imeyili esizayo, ungakwazi imeyli us at
• Landela imiyalelo ezansi imeyili ngamunye.
futhi sizokwenza ngokushesha nisuswe kusuka KONKE singesihambelanayo.
Uma kukhona imibuzo mayelana lolu Ingqubomgomo yobumfihlo, ungaxhumana nathi usebenzisa ulwazi ngezansi.
Khoriva street, 50
Last ehleliwe on 2016-07-05